ရင်းမြစ်များ - Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB)
You are here Home » ရင်းမြစ်များ
ADB Civil Society Brief on Myanmar
The Asian Development Bank (ADB) has publishedaFebruary 2015 Civil Society Brief on Myanmar which complements MCRB’s briefing paper on the CSOs and the extractives industries published in October 2014.
Briefing Paper on Civil Society Organisations and the Extractives Industries in Myanmar
MCRB has publishedabriefing paper on civil society organisations (CSOs) and the extractives industries in Myanmar which is intended to support meaningful engagement between companies and CSOs who are focussed on oil, gas and mining.
မြန်မာ့စီးပွားရေး ကဏ္ဍတာဝန်ယူမှုရှိရေးအထောက်အကူပြုဌာန (MCRB) ကပြုလုပ်ခဲ့သည့် မြန်မာခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍ၏ သက်ရောက်မှုများလေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း (SWIA on Tourism) ကို ယနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ယင်းတွင် မြန်မာ့ခရီးသွား ကဏ္ဍ အပေါ်ကျရောက် နိုင်သော ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုး သက်ရောက်
ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ဟိုတယ်နှင့် ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်မှုလုပ်ငန်းများသို့ တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ တစ်ဆင့်ခံ သော်လည်းကောင်း ၀န်ဆောင်မှုများ(သို့) ကုန်ပစ္စည်းများထောက်ပံ့ပေးနေသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အစိုးရ မဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအတွက်ရည်ရွယ်၍
Emerging Markets Private Equity Association (EMPEA) Guidelines
The Emerging Markets Private EquityAssociation (EMPEA) Guidelines identify elements of legal and tax regimes that experience from other markets has demonstrated will help attract robust international and local private equity and venture capital investment
Freedom of Association Guidelines
Guidelines on Freedom of Association (FoA) in English, Chinese and Myanmar, which aim to operationalise and contextualise what FoA means in Myanmar, based on international standards and the Myanmar legal framework.
အင်္ဂလိပ်ဘာသာနှင့်ရော မြန်မာဘာသာဖြင့်ပါရရှိနိုင်သည့် “အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းများ ဆိုင်ရာလမ်းညွှန်” သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲသူများကို အဂတိလိုက်စားမှုများကို လျော့ချရေးတွင် အကူညီပေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
Google လုံခြုံရေး စင်တာ
အွန်လိုင်းပေါ်တွင် လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိစေရန် လမ်းညွှန